Kugwazwe iphoyisa emagcekeni esiteshi - Ilanga News
Home Izindaba Kugwazwe iphoyisa emagcekeni esiteshi
Kugwazwe iphoyisa emagcekeni esiteshi
Ozwakwabo bathi kabaphephile kuleya ndawo
ATHUKA izanya amaphoyisa asebenzela esiteshini sase Brighton Beach, eThekwini, emuva kokugwazwa kulinyazwe kanzima kwelinye
lisemagcekeni alesi siteshi, ezindlini okuhlala kuzona amaphoyisa ngoMgqibelo ebusuku. UConst Ntobeko Ndlovu, ungeniswe egunjini labagula kakhulu emuva kokugwazwa esifubeni esendlini yakhe, ehlaselwa ngowesilisa obevakashile, ongelona iphoyisa. Lesi sigameko sithuse amaphoyisa amaningi ahlala ngaphakathi, akhala ngokuthi kawaphephile ngoba kulula ukuthi kungene isigebengu sibaphuce izibhamu zomsebenzi.
“Okusikhalisa kakhulu kukhona konke wukuthi yize sinezibhamu, kunzima ukuzisebenzisa uzivikele ngisho uhlaselwa ngumuntu
endlini yakho ngoba umthetho ujike uvune isigebengu,” kusho elinye iphoyisa elingavunyelwe ukukhuluma nabezindaba.
Uyisekazi kaConst Ndlovu, uNkz Nomfundo Ndlovu uthe isigameko senzeke ngoMgqibelo.“Sithole ukuthi kufike umsolwa evakashele unina ongumabhalane kulesi siteshi, kwabe sekuqala umsindo. Ubejwayele ukufika, kuthi uma esehamba, antshontshele amaphoyisa izimpahla zokugqoka kolayini,” kusho uNkz Ndlovu.
Uthi ngosuku lwesigameko, indodana yomfowabo yaqonda kumsolwa yambuza izimpahla zayo okuthiwa wazintshontsha zinekiwe. Uthi kube sekusuka umsindo umsolwa wadinwa waganwa unwabu, wangalawuleka, esabisa ngokuthi uzogwaza amaphoyisa. ILANGA linaso isithombemnyakazo (video) esikhombisa umsolwa enolaka, esabisa abaseduze abebezama ukumkhuza, ethi uzobagwaza. Kuphinde kuvele nowesifazane okubukeka sengathi ngunina, ezama ukumkhuza. Kuthiwa unina kamsolwa uzamile ukukhuluma naye kwabonakala sengathi uyalalela.
UNkk Ndlovu uthi indodana yabo ibisingene endlini yayo nabanye ozakwabo sebesezindlini zabo, bezitshela ukuthi umsindo usuphelile.
Umsolwa kuthiwa uqhamuke engasadle nkobe zamuntu, wamgwaza uConst Ndlovu inxeba elilodwa esifubeni. Kuthiwa
unina uzamile ukumbalekisa endaweni yesigameko, kodwa ozakwabo bakaConst Ndlovu bangenelela wabanjwa.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe umsolwa uboshiwe, ubhekene necala lokuzama ukubulala, kulindeleke ukuba avele enkantolo maduze.
Previous articleAbazali bakhiphe izingane esikoleni “esinobungozi”
Next articleUgeqa amagula umsolwa ecaleni lokufa komndeni